Filtrer les éléments par date : mercredi, 05 février 2020
mercredi, 05 février 2020 22:35
Traboina noho ny rano be: Niainga androany ireo fanampiana avy amin’ny BNGRC
Nanainga androany 05 febroary 2020 maraina ireo kamiao miisa enina, izay hanatitra an’ireo fanampiana avy amin’ny BNGRC ho an’ny traboina any amin’ireo faritra izay voa mafy tamin’ilay ranobe ny volana janoary teo. Hisitraka izany ireo traboina ao amin’ny Distrikan’Ambato-Boeny sy Mampikony ary Port Bergé.
Toy izany koa ireo traboina tao amin’ny Kaominina Tsaramasoandro, Anjiajia, Andranofasika ary Ambondromamy izay amin’iny lalam-pirenena faha-4 iny.
Tokantrano miisa 3 198 no voakasik’ity fanampiana niainga androany ity.
mercredi, 05 février 2020 22:28
Saran’ny « fourrière »: Nifampiresaka ny Ben’ny tanàna sy ny Fikambanan’ireo kôperativa mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra
Nifampiresaka tamin’ireo Fikambanan’ireo kôperativa mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra ny mpitantana ny tanàna, notarihan’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina androany. Tao amin’ny lapan’ny tanàna ny fihaonana « nahafantarana ny tena manahirana azy ireo, ary indrindra ny filan’ny Kaominina sy ny mponin’Antananarivo eo amin’ny fandrindrana ny fifamoivoizana sy ho fanatsarana ny fitaterana ».
Nandritra izany koa no nanazavan’ny Ben’ny tanàna ny momba ny saran’ny « fourrière » izay maha be resaka taorian’ny nandanian’ny mpanolontsain’ny tanàna ny tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra taona 2020. « Raha mahay mifanabe sy manara-dalàna isika dia tsy hisy fiara lasa an’ny amin’ny « fourrière » izany », hoy i Naina Andriantsitohaina.
Tsy mbola mihatra aloha ny saran’ny « fourrière » vao nofaritana sy nankatoavin’ny mpanolontsaina. Hitohy amin’ny zoma izao ity fihaonana androany ity.
mercredi, 05 février 2020 22:20
Coronavirus: Mifindra amin’ny zaza ao am-bohoka
Notaterin’ny haino amanjerim-panjakana sinoa androany fa nisy zaza vao teraka, 24ora, voan’ny « Coronavirus ». io zaza io no zandriolona indrindra amin’ireo mararin’ity valanaretina ity.
Manoloana izany dia milaza ireo manampahaizana fa na nifindran’ity Coronavirus avy amin-dreniny fony mbola tao am-bohoka ilay zaza, na voa teo ampahaterana.
mercredi, 05 février 2020 22:06
Tsaratanana: 1000 Ar kapoakan’ny vary
Miaka-bidy ireo entana ilain’ny mponina andavanandro ao amin’ny Distrikan’i Tsaratanana, folo andro taorian’ny andro ratsy niteraka tondradrano tamin’iny faritra iny. Manararaotra ny mpivarotra.
1 000 Ariary ny vary iray kapoaka eo an-drenivohitry ny Distrika, tafakatra 1 100 Ariary izany any ambanivohitra, toy ny ao Bekapaika.
mercredi, 05 février 2020 21:55
Ambilobe: Misy valanaretina ny kisoa
Kisoa miisa folo saika halefa ao Antananarivo no nahitana valanaretina pesta kisoa, araka ny tati-baovao tamin’ny fahitalavi-panjakana (TVM) androany hariva.
Nisy ny fepetra vonjimaika noraisina manoloana izany ka voarara tsy hivoaka an’Ambilobe ny kisoa, tsy hiparitahan’io valanaretina io.
mercredi, 05 février 2020 21:48
Ankadikely Ilafy: Hatao miaraka ny fametrahana samboadin’ireo Ben'ny Tanàna miisa 15 voafidy tao Avarandrano
Hotanterahina miaraka rahampitso alakamisy 6 febroary 2020 eo amin’ny kianja filalaovam-baolina Ankadikely Ilafy ny lanonana fametrahana ny samboadin'ireo Ben'ny Tanàna miisa 15 voafidy ao anatin'ny Distrika Avarandrano.
mercredi, 05 février 2020 21:47
HCC: Namindra fo amin’ny governemanta
Nambaran’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) , araka ny fanapahana faha 04-HCC/D3 androany 05 febroary 2020, fa azo raisina ny taratasy napetraky ny filohan’ny Antenimierandoholona tamin’ny 14 janoary 2020, mangataka amin’ny HCC ny hanafoanana tsy hanankery ireo didy hitsivolana rehetra noraisin’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny filankevitry ny minisitra.
Raha ny didy navoakan’ny HCC tamin’ny febroary 2019 dia tamin’ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan’ny Parlemanta no tsy maintsy nandefasana ireo didy hitsivolana rehetra noraisin’ny filoham-pirenena, dia namindra fo ny HCC ka nanome fe-potoana ny governemanta mba handamina ny fandefasana ireo volavolan-dalana rehetra mba hankatoavina mandritra ny fotoam-pivoriana manaraky ny Parlemanta, raha tsy izany dia foana tsy manankery avokoa ireo didy hitsivolana noraisin’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny taona 2019, ankoatra ny didy hitsivolana faha 2019-005 nanitsiana lalàna mifehy ny tetibola 2019 sy ireo didy hitsivolana mirakitra findramam-bola avy any ivelany.
mercredi, 05 février 2020 18:33
Bemanonga-Morondava: Mirongatra ny ambalavelona, naato vonjimaika ny fianarana
Mirongatra ny ambalavelona, aretin’ny maizina, ao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Bemanonga, Distrikan’i Morondava. Nanomboka ny Alatsinainy 3 febroary teo izy io.
Ny ankizivavy no tena voa, efa ho telopolo izao. Nisy nentina ao amin’ny FLM Bemanonga ivavahana sy ametrahan-tanana hanalana ny fanahy ratsy mangeja sy mampahery fihetsika ireo ankizy voa.
Nanapa-kevitra ny mpitondra ao an-toerana nampiato vonjimaika ny fianarana ao amin’ny EPP Marovoay sy ny CEG ary Lycée ao Bemanonga mandrapahitana vahaolana.
Nidina eny an-toerana ny Ben’ny tanàna sy ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana Morondava.
mercredi, 05 février 2020 18:27
CRAAD-OI sy ny Fikambanana TANY: Mitsipaka ny fanomezana tany 60 000 ha ho ampiasain’ny orinasa Elite Agro LLC
Nanao fanambarana miaraka ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien) sy ny Fikambanana TANY manohitra ny fanomezana tany 60 000 hekitara eto Madagasikara ho ampiasain’ny orinasa Elite Agro LLC avy any Emirats Arabo Mitambatra.
Tsipahanay ny fampiasàna io karazana fiombonana antoka io hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo, hoy ny fanambarana, satria « fananana iombonan’ny vahoaka Malagasy ny tany fa tsy entam-barotra ».
Toherinay mafy, hoy hatrany ny fanambarana, ny paik’ady nosafidian’ny mpitondra izay miantehatra indrindra amin’ny mpampiasa vola sy ny vondron’orinasa avy amin’ny firenena vahiny eran-tany amin’ny fambolena ny tany malagasy, fa tsy manao ho laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny hery velon’ny firenena amin’ny alàlan’ny fampitomboana isa hatrany ny fepetra fanohanana sy fanampiana ny tantsaha sy ny mpandraharaha avy eto an-toerana.
mercredi, 05 février 2020 18:16
Tsarahonenana Toamasina: Jiolahy roa mitam-basy voasambotry ny Polisy
Voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny Commissariat Boriborintany faharoa Mangarano niaraka amin'ny basy poleta sy bala ny jiolahy roa mpanao fanafihana mitam-piadiana.
Niainga avy amin’ny fampitam-baovao avy amin’ny olona tsara sitra-po ny fitadiavana ka nahazoana azy roalahy ireto tao Tsarahonenana « Carreau 3 ».
Atao famotorana izy ireo, karohina ihany koa ny namany.